Mareykanka oo qeyb ahaan joojiyay dhaqaalihii uu siin jiray Masar - BBC News Somali
Mareykanka oo qeyb ahaan joojiyay dhaqaalihii uu siin jiray Masar
Image caption Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Masar
Dowlada Masar ayaa cambareesay tallaabada Mareykanka uu ku joojiyay qeyb ahaan dhaqaalihii uu siin jiray dalka Masar. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaarada arrimaha dibadda ee Masar ayaa lagu sheegay ay ka turjumeyso go'aan xumi.
Mareykanka ayaa sannad walba dowlada Masar gargaar ahaan u siiya inkabadan hal bilyan oo doolar.
Wasaarada arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay ka walaacsantahay sida dowlada Masar aysan dooneyn inay wax uga qabato arrimaha xuquuqul insaanka, waxayna arrintani ku soo aadeysa iyadoo barlamaanka dalka Masar uu dhawaan meel mariyay sharci lagu xakameenayo hey'addaha gargaarka ee ka howgala gudaha dalka Masar.
Tallaabadan uu qaaday Mareykanka ayaa ku soo aaday saacado un ka dib markii wiilka uu soddoga u yahay madaxweyne Trump , Jared Kushner, sidoo kalena ah la taliyaha Madaxweyne Trump uu la kulmay madaxweynaha dalka Masar, Abdel Fattah al-Sisi, waxaana la sheegay inay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa hanaanka nabdda ee bariga dhexe.
Mareykanka ayaa dhaqaalo badan ku bixiya milateriga dalka Masar, waxaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn saameynta arrintani ay ku yeelan doonto calaaqaadka labada wadan.
Image caption Milateriga dalka Masar